Nexus 7 ma ciyaari karo regelingen Files? Xalliyo
> Resource > Video > Nexus 7 ma ciyaari karo regelingen Files? Xalliyo.
Ma ciyaari karo files regelingen on Nexus 7? Haa, waa su'aal caadi ah. Dad badan oo ay ku jiraan waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah ku lifaaqan fariin horay looduubay oo qaab .wav, ka dibna doonayaa inaan ciyaaro regelingen on Nexus 7. Marka aad u samayn, waxaad ka heli doontaa qalabka ma noqon karo ciyaari karaan faylasha regelingen ah. Taasi waa arrin leheyn. Waxaa jira xal deg deg ah oo u fudud in ay dhibaatadan. Taasi micnaheedu waa in loogu badalo regelingen in Nexus 7 qaabab ay taageerayaan isticmaalaya regelingen a smart in Nexus 7 Converter. Ka dib markii diinta, inaad Nexus 7. wareejin karaan faylasha wax soo saarka markaas qalabka Aqoonsanaysaan karaa iyo waa awoodaa inuu iyaga u ciyaaro si habsami leh.
The weyn Nexus 7 Converter soo bandhigay in this article si toos ah waxay bixisaa users presetting la filaayo in, kaas oo u bedeli karaan files audio iyo video si haboon qalabka ugu wanaagsan ee si toos ah oo aan sameeyo wax goobaha kale. Geedi socodka oo dhan waa mid aad u fudud, kaliya qasabno yar. Iyo xawaaraha diinta sidoo kale waa wax cajiib ah, oo kaliya dhowr daqiiqo. Waa maxay ugu, diinta durba waa sameecadda ah. Waxaa magaceeda la Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Oo waxay hoos ku qoran yahay hagaha.
1 regelingen Load in regelingen si Nexus 7 Converter
Ama adigoo gujinaya batoonka Add Files ee geeska bidix ee kore ee suuqa ama ay soo jiitaa-iyo-dhibic, si app, waayo, diinta audio aad dajiyaan kartaa files regelingen deegaanka. Ka dib markii in, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha regelingen ku daray in la soo bandhigi doonaa sida soo socota.
2 Dooro MP3 ama Nexus 7 sidii qaab wax soo saarka
MP3 format waa caan ah audio in la ciyaari karo qalabka ugu, oo ay ku jiraan Nexus 7. Dabcan, aad si toos ah u dooran kartaa qaabka filaayo in Nexus 7.
Riix sawirka qaabka on Murayaad Qaabka Output in ay arbushin ilaa liiska qaabka wax soo saarka this app ee. Si aad u dooran MP3 format sida wax soo saarka, waxaad tagi kartaa qaab tab iyo dooran category Audio in la helo qaab MP3 ah. Haddii aad rabto in aad doorato Nexus 7 sidii qaab wax soo saarka, in aad "Device" tegi kartaa> "Qaar kale"> "Nexus 7" halkii.
3 Beddelaan regelingen in Nexus 7
Ugu danbeyn, aad tagto koonaha midig ee suuqa kala barnaamijkan ayaa, oo guji badhanka badalo halkaas si ay u bilaabaan diinta regelingen in Nexus 7 qaab taageeray. Ugu dambeyntii, kaliya ka dhacay badhanka Folder Open kadib markii diinta si ay u helaan files wax soo saarka. Hadda, waxaad kaliya furaysto qalab Nexus 7 galay computer ka, ka dibna lagu wareejiyo files si ay qalabka via cable.